❖ Excel Road Map ❖
Excel ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်အောင် ဘယ်လို လေ့လာရမလဲဆိုတာ အမေးများတဲ့အတွက် ကျနော့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ယှဉ်ပြီး Excel Road Map လေး ရေးသားတင်ပြလိုက်ပါတယ်..။
Excel ကို Self Study လေ့လာလိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်..။မည်သူမဆို ပို့စ်ကို ဖတ်ကြည့်ပြီး ကိုယ် ဘယ်နေရာ ရောက်နေပြီလဲ.. ဘာတွေ ဆက်လေ့လာရမလဲ ဆိုတာ မြင်နိုင်အောင် ကြိုးစား ရေးသားထားပါတယ်..။
လေ့လာသင့်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေနေရာမှာ ကျနော်ရေးခဲ့တဲ့ ပို့စ်တွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်..။ အခြား Resources တွေကိုလဲ နောက်ထပ် ပို့စ်တစ်ခုနဲ့ ရှင်းပေးပါမယ် ခင်ဗျာ...။
▲ Basic ▲
Basic ကို မကျွမ်းကျင်ပဲနဲ့ အဆင့်ကျော်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး..။ Basic ကို မကျေညက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ သင့်လျော်တဲ့
သင်တန်းတစ်ခုတက်ရင်တက်၊ ဒါမှမဟုတ် ထိရောက်တဲ့ Resource ကိုရှာ ပြီး ကိုယ်တိုင် အရင်လေ့လာသင့်ပါတယ်..။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲ ကျင့်ဖို့၊ မပျင်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်.။ Basic နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော် တင်ထားတဲ့ အောက်က Video တွေက အများကြီး အထောက်ကူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။ လေ့လာကြည့်ပါ..။
8. Data Filtering အား ထိရောက်စွာ အသုံးပြုခြင်း
▲ Formula & Built-in Functions ▲
Basic ကျွမ်းကျင်ပြီဆိုရင် Formula တွေ၊ အရမ်းကောင်းတဲ့ Conditional Formatting လို Built-in Functions တွေ လေ့လာကြပါမယ်..။
ကဏ္ဍ တစ်ခုချင်းစီကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ Advanced အထိသုံးနိုင်အောင် လေ့လာပြီးမှ နောက် ကဏ္ဍတစ်ခုကို ရွှေ့မလား။
ဒါမှမဟုတ် ပထမတစ်ခေါက်မှာ ကဏ္ဍအသီးသီးကို Basic to Intermediate လောက်ထိပဲ အရင် လေ့လာပြီး ကျေနပ်ပြီဆိုမှ ဒုတိယ တစ်ခေါက်မှာ အားလုံးကို Advanced Level လေ့လာမလားပေါ့။
ကျနော့်အနေနဲ့ ဒုတိယ နည်းလမ်းကို အားပေးချင်ပါတယ်..။ ပထမနည်းလမ်းက တစ်ခုချင်းစီမှာ အချိန်အတော်ကြာသွားနိုင်တဲ့အတွက် ရှေ့မရောက်ဘူးထင်ရပြီး စိတ်လျှော့သွားနိုင်ပါတယ်..။ ပြီးတော့ အချိူ့ Function တွေက အခြေခံလောက်သုံးနိုင်ရင်ပဲ အရမ်းကို ထိရောက်တဲ့အတွက် ဒီနည်းလမ်းကို အလေးပေးချင်ပါတယ်..။
ဒါဆို ပထမ တစ်ခေါက်မှာ ဘာတွေ သိအောင် လေ့လာမလဲ ?
1) ပထမဆုံး Basic Math Function လေးတွေ နဲ့ Operator Precedence ကို လေ့လာထားတာ အကျိူးများပါမယ်..။
CountA, CountBlank - http://www.myanmarexcel.com/counta-countblank
Operator Precedence in Excel Formulas - https://goo.gl/ppc9t6
2) Logical Functions တွေက မသိမဖြစ် အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်..။ လွယ်ပေမယ့် ကျေညက်အောင် အများကြီးလေ့ကျင့်ထားရပါမယ်..။
3) Conditional Calculations တွေကလဲ မသိမဖြစ်ပါပဲ။ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်..။
4) Lookup Functions များကလဲ Database သမားများအတွက် မသိမဖြစ်ပါ။ အရမ်းကောင်းပါတယ်..။
5) လွယ်ကူပြီး အသုံးဝင်တဲ့ Text Functions နဲ့ Date and Time Functions များကိုလဲ လေ့လာရပါမယ်..။
6) Conditional Formatting နဲ့ Data Validation တို့လို အရမ်းကောင်းတဲ့ Built in Function တွေကိုလဲ လေ့လာရပါမယ်..။ Basic လောက်သိရုံနဲ့ အရမ်းကောင်းတဲ့ Function တွေပါ။
7) Pivot Table ကို အခြေခံ သုံးနိုင်တာနဲ့ အရမ်းကို ထိရောက်တဲ့ Analysis တွေ ရပါတယ်..။ မသိမဖြစ်ပါပဲ။
အပေါ်က သင်ခန်းစာတွေ လေ့လာနေဆဲမှာ Essential Tips & Tricks တွေကို ဒီလင့်ကနေ ကြုံသလို လေ့လာနေလိုက်ပါ။
ဒီလောက်ထိ လေ့လာပြီးပြီဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းမှာ တော်တော်ကို ထိထိရောက်ရောက်သုံးနေနိုင်ပါပြီ။
ကဲ အခု ဒုတိယ အခေါက်မှာ ဘာတွေ ဆက်လေ့လာမလဲ ကြည့်ရအောင်..။
1) Int, Round Functions, Trunc, Quotient, Mod စတဲ့
အသုံးအရမ်းတည့်တဲ့ Maths Functions တွေ ဆက်လက်လေ့လာသင့်ပါတယ်..။ သင်ခန်းစာတွေ Update လုပ်ပြီး ပြန်တင်ပေးပါမယ်..။
2) Cell Range တွေကို အမည်ပေးပြီး အသုံးပြုခြင်းက အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်..။
3) Logical Function ( IF, AND, OR ) တွေကို အခြား Function တွေနဲ့ တွဲစပ်အသုံးပြုဖို့ လေ့ကျင့်ရမယ်..။ Array အနေနဲ့ ရေးသားနည်းတွေ လေ့လာရမယ်..။
အခြား Functions တွေနဲ့ တွဲစပ်အသုံးပြုတာကိုတော့ ကျနော်တင်ထားတဲ့ All in One – Collection ထဲက အပိုင်း (၃) Case Studies တွေထဲမှာ တော်တော်များများပါပါတယ်..။
IF Array ရေးနည်း နမူနာကိုတော့ ဒီလင့်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်..။
4) Conditional Calculation ( Countifs, Sumifs, Averageifs ) စတာတွေကို Wildcard နဲ့ တွဲစပ်အသုံးပြုရင် အရမ်း အစွမ်းထက်ပါတယ်..။ https://goo.gl/mJIaGF
Formula ထဲမှာ သာမာန် Cell range အစား Table Range ပေးနည်း၊ Sumifs, Countifs တွေမှာ Item တစ်မျိူးထက်ပို တွက်ချက်နည်း၊ Sumifs,Counitifs အစား Sum Array အသုံးပြုနည်းစတာတွေကို ဆက်လက် လေ့လာရပါမယ်..။
ဒီအတွက် သင်ခန်းစာတွေ ကျနော် မကြာခင် ပို့စ်တင် ရှင်းပြပေးပါမယ် ..။
5) Advanced Lookup တွေကိုလဲ ကြေညက်အောင် လေ့လာရပါမယ်.။ လိုချင်တာကို Lookup Array နဲ့ ရေးသားပြီး ရှာနိုင်ရပါမယ်..။
(ကျနော်ရေးထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေ ရှိပါတယ်..။ ပြန်ရှာပြီး ဒီနေရာမှာ Update လုပ်ပေးပါမယ်..။)
6) လေ့လာဖို့ ကျန်နေသေးတဲ့ အစွမ်းထက်တဲ့ Text Functions တွေနဲ့ Date and Time Functions တွေကို ဆက်လက်လေ့လာသင့်ပါတယ်..။ ဥပမာ DATEDIF ဆိုရင် မသိမဖြစ်လို့ ဆိုရမှာပါ..။
7) Conditional Formatting နဲ့ Data Validation တို့ကို စိတ်ကြိုက် အသုံးပြုနိုင်ရပါမယ်..။ သူ့မှာ ပါတဲ့ Function တွေ အားလုံး နားလည်ပြီး လိုသလို အသုံးချနိုင်ရမယ် ၊ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ပိုင် Formula တွေ ရေးပြီး Customize လုပ် ခိုင်းနိုင်ရပါမယ်.. ။
ဥပမာအနေနဲ့ ဒီသင်ခန်းစာတွေကို လေ့လာကြည့်ပါ၊ အများကြီး ဆက်လေ့လာဖို့ ကျန်ပါသေးတယ်..။ အလျဉ်းသင့်သလို ရေးသားပေးပါမယ်..။
သတ်မှတ်ရက်ရောက်သည့်အခါ Date Alarm အနေဖြင့် ကာလာ ပေါ်စေရန် http://goo.gl/zYtguQ
ထည့်သွင်းပြီးသော Data များ ထပ်မံမထည့်သွင်းစေရန် (Preventing Duplicated Entry)
8) Pivot Table ကို Advanced Level အသုံးပြုနိုင်ပြီး Chart , Graph တွေကို လိုသလို Customize လုပ်နိုင်ရပါမယ်..။ Dashboard တွေ ရေးသားနည်း ဆက်လက် လေ့လာရပါမယ်..။
Dashboard အတွက် သင်ခန်းစာတွေ ဆက်သင်ပေးပါမယ်.။ Chart, Graph နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီလင့်မှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လေ့လာနိုင်ပါတယ်.။
ဒါတွေ လေ့လာနေဆဲမှာပဲ ကျနော်ရေးသားထားတဲ့ All in One Collection ထဲက Case Studies တွေ၊ Tips and Tricks တွေကို ဆက်လက် လေ့လာနေသင့်ပါတယ်..။ ကျနော် အပေါ်မှာ ဖော်ပြဖို့ ကျန်ခဲ့တဲ့ Subtotal, What if Analysis, 3D Formulas, Consolidate စတာ တွေကိုလဲ ဆက်လက်လေ့လာနေရပါမယ်..။ ( All in One Collection မှာ တော်တော်များများရှိပြီးသားတွေပါ..။)
အခုထိ အေးဆေး ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ Macro Recording ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးချနိုင်အောင် လေ့လာသင့်ပါတယ်..။ ပြီးရင် Active X Controls, Form Controls တွေကို လိုသလို အသုံးချနိုင်အောင် လေ့ကျင့်ရပါမယ်. ။
ဒီအတွက်လဲ ကျနော် သင်ခန်းစာတွေ ရေးပါဦးမယ်..။
ဒီအထိ ပြီးရင်တော့ တော်တော်ကို ဟုတ်သွားပါပြီ။ တကယ်ကို Professional ကျကျ အသုံးချနိုင်ပြီ။
ဆက်လေ့လာစရာမကျန်တော့ဘူးလားဆိုတော့လဲ အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်..။
Excel ရဲ့ များပြားစွာသော Formula တွေကို ဆက်လက်လေ့လာမယ်၊ ဒါမှ မဟုတ် နောက်ထပ် အဆင့်မြင့် ဘာသာရပ်တစ်ခုကို ဆက်လက်အထူးပြု လေ့လာမယ် စသဖြင့် ပေါ့။
Excel Financial Modelling တွေ ကို လေ့လာမလား ?
VBA Programming ကို လေ့လာပြီးကိုယ်ပိုင် Excel Functions တွေ ရေးသားနည်း၊ အဆင့်မြင့် Dashboard ရေးသားနည်း၊ Database Project ရေးသားနည်းတွေ လေ့လာမလား ?
Excel 2010 က စတင် အသုံးပြုလို့ရတဲ့ Power BI ( Power Query, Power View, Power Pivot) စတာတွေကို ဆက်လက်လေ့လာမလား ?
စသဖြင့် Specialize လုပ်လေ့လာစရာတွေကတော့ အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်..။
အခု ပို့စ်က အတော်ရှည်နေပြီဆိုတော့ Specialize လုပ် ဆက်လက်လေ့လာရမယ့် Subject တွေကိုတော့ နောက်ပို့စ်တစ်ခုနဲ့ ထပ်ရှင်းပြပေးပါမယ်..။
ကျနော့်သင်ခန်းစာတွေကလွဲပြီး English / Myanmar Excel သင်ခန်းစာတွေ လေ့လာနိုင်တဲ့ Websites, Pages များ အကြောင်းလဲ ပို့စ်တစ်ခုနဲ့တင်ပါဦးမယ်..။
အခုတင်ပြခဲ့တာက ကျနော် တစ်ယောက်တည်းရဲ့ အယူအဆဖြစ်လို့ လုံးဝ အမှန်အတရား၊ အကောင်းဆုံး လို့ မဆိုလိုပါဘူး..။ အတွေ့အကြုံ အပေါ် ကို အခြေ ခံပြီး အကောင်းဆုံး အကြံပေးခြင်းတာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ..။
Excel ကို အကျွမ်းကျင်ဆုံး အသုံးပြုနိုင်ကြပါစေ ခင်ဗျာ..။
Posted by dawallay lay at 4:58:00 AM
Myanmar Excel Expert Team19 hrs · ❖ Excel Road Map...
วิธีแก้ปัญหาติดตั้ง UEFI Windows บนดิสก์แบบ MBR ไม...
การลง window8.1 acer E1 410 เครื่อง lock BIOS UEFI...
+9အေးကျော်-နည်းပညာ added 12 new photos.July2· န...
ကွန်​ပျူ​တာ ​အ​ဖွင့်..​အ​ပိတ်... ​မြန်​ဆန်​စေ​ဖို...